Akhris maqaal ka hadalaya xilliga kala guurka ah ee dds. |
Akhris maqaal ka hadalaya xilliga kala guurka ah ee dds.
Hordhac: Qormadani waxay ku saab santahay xog waran uu dhulku/deegaan ku iskaga war bixinayo wax yaabihii ku dhacay ama iska badalay mudadii 26 ka sano ee ururka ONLF hogaamintoodu ka maqnayd dhulka una gudbinayo madaxda ururka si ay ugu xisaab tamaan xiliga wada xaajoodka iyaga iyo itoobiya ay yeelanayaan iyo waliba wada hadalada kadib qorshayaasha ay qaadan doonaan.
Afeef: Xog warankani maadaama uu ku saab sanyahay dhac’dooyin hore iyo waaqica dhabta ah ee deegaanku ku jiro, looguna talagalay in wax lagu saxo, cidii uu taabto ama uu magac dhabo, yayna ula kicin dhanka xun ee xaga wanaaga haka fiiriyaan.
Warbixintii dhulku u diray madaxda ONLF
Marka hore hambalyo iyo salaan iga gudooma bagaadna u go’aan sateen inaad dib iigu soo noqotaan.
Marka xigta waxaan idin leeyahay “Ma ogtihiin in wax badani inoo kala dambeeyay oona qoraal kooban ku soo gudbin karin?” Bal aan waxyar idiinka sheego, waana sidan hoos ku xusan.
– Boqolaal kun oo qof ayaa loo dilay/isu dishay ama u dhimatay sababo la xidhiidha ururka ONLF. Agoon aad u tiro badan ayaa daryeela aan la ildaran. Sidoo kale malaayiin dad ah ayaa ka haajiray ciidoodii hooyo.
– Dhul aad u badan (waaxahaygii ka mid ahaa) ayaa si khaldan qowmiyado/deegaana kale loogu wareejiyay sida: Baabili, Gursum, Jinacsani, Maaiso, Mayu muluqo, – – – IWM oo Oromada lagu wareejiyay, Cadaytu, Cundhufo, – – – oo Canfarta lagu warewjiyay, Diridhaba iyo Mooyaale waa la wada yeeshay hadana fara caaradood bay ku jiraan in la mariyo wadadii lamariyay deegaanadaa hore.
– Deegaanadii soomaalida ee ku dhexyaalay oromiya ee Balbalayti, Bardoode, miliqaayi, miidhaa, – – IWM wuxuu noqday oo loo aqoon saday dhul oromo, dadkii dhawrka malyan ee soomaalida ahaa ee dhawrka qarni ku dhaqnaa waxaa laga dhigay; wax la laayay, wax lasoo barakiciyay (oo xiyo aan cidina u dhiil haynin ku silcaya sida Qoloji oo kale) iyo wax wali ku xaniban halkoodii oo xayaatul-kalbi ku nool mawd sugayaalna ah.
– Colaad siyaasadaysan ooy khubaro wayaane/TPLF ahi dajisay (waa kuwii nin qar taydii horay u gumaaday, gabdhahaygii gu’meeyay, geelaygii baabi’iyay, dhulkaygii bixiyay, dheef taydiina dhoofsaday) hor’jooga haygiina fulinayay ayaa la ii abuuray oo la igaliyay oo maanta noo dhaxaysa aniga iyo dhamaan qowmiyadaha kale ee itoobiya ha ugu daraadaan oromada iyo axmaaradu e.
– Mudadii aad iga maq’naydeen dadkii deegaanka dadaal balaadhan oo wajiyo kala duduwan leh baa lagu bixiyay sidii isbadal dhan walba ah loogu samayn lahaa (maskax dooda, mab da’ooda, dhaqan kooda, aragtidooda siyaasadeed, hab nololeed kooda dhaqan-dhaqaale). Dadaaladaas la galiyay ayaa isugu jiray sidan soo socota:
a) Kala qoqo/kala qaybin iyo isku dir /isku dhufasho lagu kala dilayo bulshada walaalaha ah ee deegaanka ku wada nool dhexdooda, loona tusay in jifo/beel hebla tahay cadawgooda koobaad ee u baahan in jifadu ka xorowdo. Taasina waxay keentay inay jifo waliba hoos gasho saaxiibna ka dhigato kii khidada khayaanada ah u dagay walaalkiina cadaw ka dhigto, taasoo meesha ka saartay ama kasaaraysa mid nimadii iyo wax wada qabsigii danta guud.
b) Fursado waxbarasho ayaa lasiiyay arday aay tiro yarayn oo kasoo aflaxay jaamacadaha dalka itoobiya ilaa PhD, si looga saaro mabdi’ii soomaalinimada iyo xor’nimo doonka ahaa looguna shubo/ abuuro mabda’ cusub oo itoobiyaanimo ah. Waxaana lagu guulaystay kumanaan da’yar aqoonyahamiin ah oo aaminsan kuna faanaya itoobiyaanimadooda in la abuuro maadaama ay ku dhasheen kuna horeen nidaam itoobiyaanimo ah.
c) Waxaa la kala dilay dadka deegaanka iyo walaaladooda soomaalida ah ee ay jaarka ay yihiin oo cadaawad siyaasadaysan loo kala dhexdhiyay oo la yidhi ruux soomaali ah yuuna soo galin deegaanka.
d) Waxaa la abuuray dad badanna la aaminsiiyay inuu ururka ONLF iyo magaca guumaystihii ingiriisku dhulkan u bixiyay ee Ogaadeeniya ay yihiin una taagan yihiin qabiil gooni ah oo ayna matalin dhamaan qabiilada kale ee deegaanka wada daga. Taasina waxay abuurtay aragti ah, ONLF waa reer oo Looma dhano, magaca dhulka ay ugu yeedhana waa khalad. Arintan ayaa sii kala fogayn karta dadka deegaanka korna u sii laali karta midnimadii iyo hanashadii xuquuqda iyo xoriyadii mudada dheer loo soo halgamayay.
– Inkastoo dadka deegaanka lagu shubay lagana dhaadhiciyay itoobiyaan baad tihiin sida qowmiyadaha kale, kadana kumayna helin wax xuquuq ah, waayo, manoqon karaan hogaanka dalka ugu sareeya, cod kuma laha go’aamada talada dalka, kamid ma aha shaqaalaha dhamaan wasaaradaha iyo laamaha kaladuduwan ee dawlada fadaraalka, tirada xubnaha baarlamaanka iyo wasiirada eer dal ma aha mid u dhigma tirada bulshada deegaanka, kuma jiraan diiwaanada taariikhda dalka itoobiya, ma helin mashaariicda maalgalinta waawayn etc.
– Shidaalkii mudada dheer gaadhka laga soo hayay sifo aanaan ogayn ayaa lagu soo saaray/ lagu soosaarayaa booyado waawayna lagu dhurtaa oo lagu dal-dashaa xili xaadirkan walina
W|Q shaafici daahir